Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. - News: Maamulka Kililku aad ayuu u ogyahay Kuwa ka Cadhaado ONLF inaysan waxba u soo kordhinaynin!
December 09 2013 17:43:00
Maamulka Kililku aad ayuu u ogyahay Kuwa ka Cadhaado ONLF inaysan waxba u soo kordhinaynin!
(Ogadentoday Press)- Masuul ka tirsan Maamulka Kililka oo diiday inaan magaciisa shaacino ayaa si iskii ah oola soo xidhiidhay Warbaahinta Ogadentoday Press, Masuulku wuxuu ku eedeyay Ogadentoday Press inaysan xaalada Gobalka gaar ahaan Horumarka ka gaabiyeen isla markaasna aysan waxba ka qorin marka laga yimaado safarada Madaxda Kililku galaan iyo mar mar dhif ah oo Deegaanka DDSI sida uu haddalka u dhigay aan ka warano.
Masuulkan ayaa sheegay in Gobalka Ogaden uu gaadhay horumar wanaagsan oo dhan walba, mar aanu waydiinay xaalada xuquuqda Aadanaha ayuu yiri waa jiraan arrimo dhaca balse waa qaladaad ciidamada ka dhaca Maamulkana mar walba innuu saxo ayuu xoogga saaraa!
Su,aal ku saaban Dadka ku xidhan Jeelka Caanka ah ee Jeel Ogaden oo aan waydiinay ayuu yiri, � waa xoogga boqolaalan ah� balse Nabadiidku dadka waxay ooga dhigaan Kumaankun!
� Ogadentoday Press waxay haysaa xog ku saabsan dad jeelka lagu dilay, waxaanu horrey u warsanay Saraakiil ka mid ahaan jirtay Liyu Police waxayna noo xaqiijiyeen arrimahaas, Addu maxaad ka leedahay?
Jeelka mar mar waxaa ka dilaaca xannuun, waa laga yabaa qof xannuunkaas inuu u dhinto ama isagoo xannuunsan la keenay oo aan helin dawooyin balse ma jiraan wax si kas ah jeelka loogu dillo? Markalle ayaan su,aasha ku celinay oo ah � miyaysan jirin dad Jeelka jirdil loogu gaystay waxaan ahyna Magacyadda dadkaas? Been ayaa la idin sheegay ayuu yiri!
ONLF ma is leedahay way dhamaatay sida aad shaagtaan? Adu shaqsiyan ma aaminsan tahay ONLF in ay dhamaatay marka aadan fikirkaaga ku qiimeyn Siyaasadda Dacaayadda ah ee Maamulka?
Annu ma aaminsani ONLF inay xataa dhamaan doonto, sababtoo ah waa Fikir abuurmay! fikirkuna si sahal ah kuma dhamaado!
Ka waran kuwa ONLF ahaan jiray ee idin yimaada!
Marka aan xaqiiq kuu sheego, labbo ayaan u kala qaadnaa, mida Kobaad nin dagaal ku jiray oo lagu qabtay ama ciidan ahaan jiray, ninkaas sharciga ayaa la waafajiyaa, muddo wuu xidhnaadaa kadibna labbo mid ayuu noqdaa, ama ciidan noqdaa oo iyagii dib oola dagaalama ama magaaladiisa ayuu iska galaa oo cafis waydiistaa waana la cafiyaa. Midka labaad waa kuwa qurbaha ka yimaada ee dhaha ONLF ahayn, xaqiiqtan markaan kuu sheego siyaasada Xisbiga SPDP, ama Kililka waannu ognahay kuwa qabiil la soo duda oo soo cadhoo